သင်လွဲချော်မနေသင့်သော Android application အပိုင်းတစ်ပိုင်း !! | Androidsis
Francisco Ruiz | | APK, Android application များ, NOTICIAS
မင်းကိုအကြံပေးချင်တဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာ application တွေကိုနေ့စဉ်ရှာဖွေပြီး Androidsisvideo ဗီဒီယိုရုပ်သံလိုင်း, ငါသည်ဤနှင့်အတူမျက်နှာချင်းဆိုင်လာကြပြီ ယနေ့ငါအထူးသဖြင့်တင်ပြချင်သောအံ့သြဖွယ် application ကို.
ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်အားအပြည့်အ ၀ ရှင်းပြရန်လျှောက်လွှာတစ်စောင်။ Application တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးသိပြီး၎င်းကိုလုပ်နိုင်သည်ကိုမြင်လျှင်။ Android operating system နဲ့ပါတ်သက်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များ၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အလွန်ယုံကြည်ပါသည်၎င်းတို့သည်စမတ်ဖုန်းများလား၊
ဒီထက်ပိုပြီးမသုံးပါနဲ့ အစွမ်းထက်နှင့်ထိရောက်သော Add-Blockerသို့တည်းမဟုတ်အဘယ်အရာသည် ပို၍ ရိုးရှင်းသောဘာသာစကားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်း, နာမကိုအမှီပြုသည် AdClear ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပတွင်ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့သာဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက် Adclear ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။
ငါ့အတွက်အရမ်းသုံးရလွယ်ကူပြီးထိရောက်တဲ့ application တစ်ခုလည်းရှိသည်။ ၄ င်းတို့၏ဘဝကိုမရှုပ်ထွေးစေလို။ ရှုပ်ထွေးသောဆက်တင်များရယူလိုခြင်းမရှိသူများသို့မဟုတ်ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းကိုထိရောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ထားသော app တစ်ခု။ ဤတွင်ရိုးရှင်းစွာခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးခလုတ်တစ်ခုနှင့် voila ကို enable လုပ်ခြင်း၊ ငြီးငွေ့စရာကောင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဂိမ်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြားအရာများမှဖယ်ထုတ်ထားသောကြော်ငြာ။
ငါဘယ်လိုပြောမလဲ ငါသည်ဤအရေးအသား၏အစအ ဦး ၌သင်တို့ကိုငါစွန့်ပစ်သောပူးတွဲပါဗီဒီယိုထဲမှာငါသုံးမိနစ်ထက်နည်းအတွင်း application ကိုဘယ်လို download, install နှင့် configure ဘယ်လိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအရမ်းကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်လွယ်သောကြော်ငြာများနဲ့အတူဖြတ်သန်းသွားသောထိုအပလီကေးရှင်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများတွင်ထိုကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းကိုသင်စတင်ခံစားနိုင်ပါပြီ။
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် AdClear အားအခမဲ့ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင်လွဲချော်မနေသင့်သော Android application အပိုင်းတစ်ပိုင်း !!
Ito က ဟုသူကပြောသည်
Honor 8X တွင်အလွန်ကောင်းသည်၊
EMUI 20 beta ဖြင့် Mate 10Pro မှစမ်းသပ်ခြင်း။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွာကို Android 10 Mate 20 Pro မှာ beta ဖြစ်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသလား။
အနည်းဆုံးအမှားသေးသေးလေး မှလွဲ၍ ကျန်အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ ကော်ပီကူးခြင်းနှင့်မိတ္တူကူး။ လမ်းအပြင်ထွက်သွားသော၊
Google သည်ပထမမျိုးဆက် Pixel အမျိုးအစားကိုမစွန့်လွှတ်သေးပါ